एसईओ अडिट गर्नका लागि सही उपकरण के हो? - Semalt सल्लाहहरू
आज, एसईओ अडिटको महत्त्व अब प्रमाणित गर्न बाँकी छैन। वास्तवमा, यसले खोज इञ्जिन अनुकूलनमा धेरै नै ठूलो भूमिका खेल्छ। त्यसोभए, यदि तपाईं एसईओ प्रदायक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई यो जान्नुपर्दछ कि यो जिम्मेवारी तपाईं माथि आउँछ।
जहाँसम्म, यदि तपाईंलाई यो सुम्पिएको यो जिम्मेवारी पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं एक गुणवत्ता विश्लेषण उपकरणमा निर्भर हुनु पर्छ। यस्तो उपकरणको साथ तपाईले सजिलैसँग समस्याहरू चिन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंको पार्टनरहरूको साइटहरूले सामना गरिरहेका छन्। त्यसो भए, यसले तपाईंलाई उत्तम समाधानहरू प्रस्ताव गर्न अनुमति दिनेछ।
तर यस अवस्थामा तपाईले आफैलाई सोध्नु पर्ने वास्तविक प्रश्न यो हो: यो अन्त्य प्राप्त गर्नका लागि उत्तम विश्लेषण उपकरण कुन हो? यस लेखको बाँकीमा हामी तपाईंलाई सही उपकरण मात्र होइन एसईओ अडिटको महत्त्वका साथ प्रस्तुत गर्नेछौं। यस कारणका लागि, हामी तपाईंलाई यो गाइडमा भनिने सबै कुरामा विशेष ध्यान दिन आमन्त्रित गर्दछौं।
खोज इञ्जिन अनुकूलनको महत्त्व
गुगलमा राम्रो स्थितितर्फ पहिलो चरण एसईओ अडिट गर्नु हो। वास्तवमा, यसले तपाईंलाई अनुमति दिन्छ साइट को स्थिति को विश्लेषण खोज इन्जिन अनुकूलन प्रक्रियाको विभिन्न आयामहरूमा। आज, उच्च गुणस्तरको डिजाइन र उत्कृष्ट सामग्रीको साथ, धेरै राम्रो संरचित साइटहरू हेर्न सामान्य छ; केवल गुगलको पहिलो स्थानमा तिनीहरूको पृष्ठहरू मार्क गर्न असमर्थ।
यो असंगत देखिन्छ, हैन? तर वास्तविकतामा, यो तथ्य तपाईले सोचेभन्दा धेरै सामान्य छ। त्यसोभए, के हुँदैछ भनेर पत्ता लगाउने समाधान केवल एक शक्तिशाली SEO विश्लेषण उपकरणको साथ मात्र सम्भव छ।
अर्को धेरै सामान्य अवस्था, जहाँ एक एसईओ विश्लेषण आवश्यक पर्दछ, जब अचानक, वा बिस्तारै, साइट गुगल उत्तर पृष्ठहरूमा स्थानहरू हराउन थाल्छ। तपाईं सजिलैसँग कारकहरू पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ जुन त्यस्तै साइटको श्रेणीलाई पछाडि राख्दै यदि तपाइँ अप्ट इन गर्नुहुन्छ उत्तम विश्लेषण उपकरण।
तपाईलाई थाहा छ, गुगलको एल्गोरिदम गतिशील छ र SEO नियमहरू सबै समय परिवर्तन हुन्छ। यसैले, खोजी ईन्जिनहरूका लागि वेबसाइटहरूको अप्टिमाइजेसन शीर्ष स्थानहरूमा रहनको लागि सँधै अप-टु-डेट हुनै पर्दछ। पछि खोज मार्केटिंग एक वेबसाइटमा ट्राफिक उत्पन्न गर्नको लागि मुख्य च्यानल मध्ये एक हो, शीर्ष स्थानहरू बाहिर हुनु यो अकल्पनीय कुरा हो।
जैविक ट्राफिक एक हो जुन गुगल प्रतिक्रिया पृष्ठहरूमा क्लिकबाट आउँदछ। वास्तवमा, यस प्रकारको ट्राफिकलाई योग्य भनिन्छ, किनभने यसमा धेरै उच्च रूपान्तरण दर छ। यसको बावजुद, एक SEO लेखा परीक्षा को प्राप्ति मौलिक छ सफलताका लागि खोज ईन्जिनमा जोखिमको सर्तमा।
अब हामी पत्ता लगाऔं, सब भन्दा राम्रो SEO अडिट उपकरण तपाईले आफ्नो पार्टनरहरूको वेबसाइट कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ।
तपाईको लागि उत्तम SEO विश्लेषण उपकरण पत्ता लगाउनुहोस्
आजको बजारमा, तपाईं मिति सकिएको विश्लेषण उपकरणहरूको संग्रह फेला पार्नुहुनेछ। तर के यी उपकरणहरूसँग रेकर्ड समयमा तपाईंको पार्टनरहरूको साइटको पूर्ण अडिट गर्ने क्षमता छ? यो तपाईंको चिन्ताको विषय हो यदि तपाईं आफ्नो विश्लेषणको लागि पर्याप्त उपकरणको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ।
धेरै विश्लेषण पछि र पुरानो उपकरणहरूको असफलतालाई ध्यानमा राखेर धेरै कार्यहरू गर्न, Semalt विज्ञहरूले एक उपकरण भनिने डिजाईन गरेका छन् SEO समर्पित ड्यासबोर्ड। थप रूपमा, यी विज्ञहरूले धेरै शक्तिशाली कार्यहरूको दायरा संग उपकरण सुसज्जित छन्। यी कार्यहरूको लागि धन्यवाद, तपाईं एक छिटो तरिकामा र छोटो समयमा साइटमा कार्यहरूको समूह पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
संग प्राविधिक SEO लेखा परीक्षण सुविधा SEO समर्पित ड्यासबोर्डको, तपाईं क्लिकमा साइटहरूको पूर्ण विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ। यसका अतिरिक्त यसले तपाईंलाई साइटको गति मात्र होइन तर यससँग सम्बन्धित सबै अन्य समस्याहरू पनि निर्धारण गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं यो सामग्रीमा धन्यवाद तपाईंको सामग्रीको विशिष्टता पनि जान्नुहुन्छ। यस उपकरणको सब भन्दा ठूलो फाइदा यो हो कि यो सँगै तपाईंलाई यी सबै कार्यहरू गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ। अब, SEO ड्यासबोर्डमा उपलब्ध अन्य कार्यहरू पत्ता लगाऔं।
एसईओ समर्पित ड्यासबोर्ड को रिपोर्ट केन्द्र, तपाईं आफ्नो ढाँचाको रिपोर्ट विभिन्न ढाँचामा डाउनलोड गर्न अनुमति दिनुहुन्छ। यसबाहेक, तपाईंसँग पीडीएफ वा CSV ढाँचामा डाउनलोड गर्न विकल्प छ।
एकचोटि तपाईंले यी रिपोर्टहरू तपाईंको ग्राहकलाई पठाउनुभयो, तिनीहरू तपाईंको क्षमताको बारेमा गवाही दिन हिचकिचाउँदैनन्, किनकि राम्रोसँग गरिएको रिपोर्ट प्रमाणको साथ हुनुपर्दछ। त्यसोभए, समर्पित एसईओ ड्यासबोर्डको साथ, तपाईं प्रत्येक ग्राहक अनुरोधमा तपाईंको लोगोको साथ आफ्नो रिपोर्ट ब्रान्ड गर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल खोजी शो
गुगल खोजी प्रसारण उपकरणको सुविधा हो, देखाउनको लागि अनुमति दिन्छ, साइटको विकास र गुगल खोजीमा यसको स्थान। थप रूपमा, यसले प्रतिस्पर्धीहरूमा निम्न जानकारी प्रदान गर्दछ:
सब भन्दा बढि प्रयोग भएका किवर्डहरू
तिनीहरूको पदोन्नति नीति ठाउँमा छ
तिनीहरूको साइट को ट्राफिक
चाहे तपाईं एसईओ एजेन्सी हो वा स्वतन्त्र एसईओ प्रबन्धक, उपकरणको यस सुविधाले तपाईंलाई धेरै नवीन हुने फाइदा प्रदान गर्दछ। वास्तवमा, यसले तपाइँलाई डिजाइन र तपाइँको ग्राहकहरु लाई प्रत्येक विश्लेषण को रिपोर्ट रिपोर्ट प्रदर्शन गर्न अनुमति दिन्छ। यस तरिकाले, तपाईं आफ्नो ग्राहकहरूको विश्वास हासिल गर्नुहुनेछ र पछि तपाईंको कम्पनीको प्रतिष्ठा बढाउनुहुनेछ।
अन्य चीजहरू जुन एसईओ समर्पित ड्यासबोर्डले वेबसाइट अडिटको बखत खातामा लिन्छ
डाटा भेला र प्रसंस्करणले तपाईंलाई निम्न माध्यमबाट SEO रणनीति पूर्ण गर्न मद्दत गर्दछ:
विभिन्न सम्भावनाहरू (सामग्री र कार्यनीतिहरूको मिश्रण) को कल्पना गर्दै जुन तपाईंको वेबसाइटमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ; खोज परिणाम पृष्ठहरूमा यसको स्थिति सुधार गर्दै।
दोस्रो, तपाईंको एसईओ अभियानलाई तपाईंको दर्शकहरूको आवश्यकता र प्राथमिकतामा अनुकूलन गर्नुहोस्। त्यसो भए, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले प्रयोग गर्ने कुञ्जी शब्दहरूलाई सिफारिस गर्दै।
लोडिंग र अनुक्रमणिका समयहरू जाँच गर्दै, बाउन्स दर, प्रतिक्रिया त्रुटि दर र रिडिरेक्टहरू।
यूआरएलहरू जाँच गर्दै जुन बढ्दो अनुक्रमणिका हुन्छन्। यो शब्द म्याकेनिजी डिजाइन गर्न प्रयोग हुन्छ जसको द्वारा खोज ईन्जिनहरूले वेब साइटहरू खोज्छन्।
अब तपाइँलाई तपाइँको लागि सही उपकरण थाहा छ, अब हामी वेबसाइटको एसईओ अडिटले वास्तवमा के समावेश गर्दछ हेरौं।
एसईओ अडिट के हुन्छ?
यस केसमा तपाईले बिर्सनु हुँदैन कि प्रोफेशनल एसईओ अडिटले खोज इन्जिनका लागि वेबसाइट अप्टिमाइजेसन प्रक्रियाको सबैभन्दा विविध आयामहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ।
वास्तवमा एसईओ कार्यलाई महत्त्वपूर्ण कारक मान्नु पर्दछ। किनभने तपाईंले खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन प्रक्रियाको विभिन्न आयामहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ताकि तपाईं गुगलमा साँच्चिकै बाहिर खडा हुन सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, एक SEO प्रतिस्पर्धा विश्लेषण पनि धेरै मद्दत गर्दछ।
त्यसो भए तपाईको एसईओ प्रोजेक्टहरूका लागि तपाईले यी प्रत्येक आयामको ठीकसँग सावधानीपूर्वक विश्लेषण गर्नु पर्छ ताकि काम उत्तम छ। जे होस्, केहि पक्षहरुलाई निरन्तर अनुगमन गर्न यो आवश्यक छ। ती मध्ये, हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं:
स्ट्रक्चरल एसईओ: SEO कारकको विश्लेषण जुन साइटको संरचना समावेश गर्दछ।
अन-पृष्ठ एसईओ: वेबसाइटको प्रत्येक पृष्ठमा एसईओ तत्वहरूको विश्लेषण।
SEO बन्द पृष्ठ: बाह्य लिंकहरूको विश्लेषण जुन वेबसाइटले प्राप्त गर्दछ र उनीहरूको गुणवत्ता।
SEO मा SERP: SEO कारकहरूको विश्लेषण जुन साइटलाई खोजीमा अधिक मूल्यवान बनाउँदछ।
राम्रोसँग बुझ्नको लागि यी पक्षहरूमा अझ विस्तृत विवरणहरू हेरौं।
स्ट्रक्चरल एसईओ भागमा, Semalt उपकरणको साथ बनेको साइटको विश्लेषणले केहि कारकहरू प्रकट गर्दछ जस्तै:
टुटेका लिंकहरूको अस्तित्व।
मार्गहरू नक्कल सामग्रीमा अग्रणी।
पृष्ठ लोड गति।
गुगल खोजी कन्सोलको साथ एकीकरण।
साइट नक्शा र अन्य सहायक उपकरणहरू जाँच गरियो।
पृष्ठ एसईओमा केन्द्रित एसईओ अडिटमा, निम्न मापदण्डको पर्दाफास भयो:
नक्कल सामग्रीमा अग्रणी मार्गहरूको अस्तित्व।
मेटा ट्यागहरूको अभाव।
यी सबै मापदण्ड बाहेक, समर्पित SEO ड्यासबोर्ड तपाईंलाई पृष्ठमा अन्य तत्वहरूको विश्लेषण गर्न अनुमति दिन्छ।
एसईओ अडिट जसलाई हामी एसईओ अफ-पृष्ठ भन्छौं अन्य साइटहरू र सामाजिक नेटवर्कहरूबाट लिंकहरूको मात्रा र गुणको विश्लेषण गर्दछ जुन साइटहरूमा औंल्याउँछ।
थप रूपमा, विषाक्त लिंकहरू जुन तपाईंको खोजी रैंकिंग र अन्य कारकहरूलाई हानी पुर्‍याउँछ भनेर उपकरण मार्फत विश्लेषण गरिन्छ।
SEO मा सर्प
अन्तमा, हामीसँग एसईओ अन सर्प छ, जुन एक पेशेवर एसईडी अडिटमा अवसरहरू पहिचान गर्न खोज्दछ। यसले तपाइँको पृष्ठहरूलाई खोजीमा विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति लिन मद्दत गर्दछ। यो हामी हो कल छ "शून्य स्थिति" गुगलको र रिच स्निपेट्सको साथ सूचीकरण, जसले अन्यहरू बीच साइटहरू हाइलाइट गर्दछ।
एसईओ ड्यासबोर्डको साथ एक नि: शुल्क १--दिन परीक्षण प्राप्त गर्नुहोस्
यस गाइडमा समावेश सबै विन्दुहरूको अतिरिक्तमा, यदि तपाईं कार्यको ज्ञान प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने SEO समर्पित ड्यासबोर्ड, Semalt एक नि: शुल्क 14-दिन परीक्षण प्रदान गर्दछ। यस १--दिन परीक्षण अवधिमा, तपाईंसँग उपकरणको सबै सुविधाहरूमा व्यापक पहुँच हुनेछ।
यसले तपाईंलाई उपकरणको प्रदर्शन परीक्षण गर्न अनुमति दिनेछ। थप रूपमा, परीक्षण अवधिभरि तपाईंसँग तपाईंको ग्राहकहरूको माग वा तपाईंको सबै सम्भावनाहरूको डेटा ट्र्याक गर्ने क्षमता हुनेछ। पछि, Semalt तपाइँलाई परीक्षण अवधिको अवधिमा सबै आवश्यक तत्वहरू प्रदान गर्दछ।
निष्कर्षमा, यो दिमागमा राख्नुहोस् Semalt को SEO ड्यासबोर्ड बजारमा कुनै पनि अन्य एसईओ उपकरणको लागि अतुलनीय छ। यसबाहेक, यो मुख्यतया नवीन चरित्रमा केन्द्रित एक उपकरण हो र यो एसईओ विशेषज्ञहरु द्वारा सिफारिस पनि गरिएको छ।
वास्तवमा, यो धेरै पहुँचयोग्य छ र विश्वभरका धेरै प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको व्यावासायिकताको लागि यसको उपयोगिता र प्रदर्शनलाई प्रमाणित गर्छन्। तपाईंले यसको प्रयोगकर्ताहरूको विवरण जाँच गर्नु पर्छ उपकरणको विचार प्राप्त गर्नका लागि। पढाईको लागि धन्यवाद र तपाईंलाई भेट्नुहुनेछ!